Degdeg: Wasiirka Caafimaadka ayaa ka saaraya Pneumorel Syrup iyo Tablets - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB »Degdeg: Wasiirka Caafimaadka wuxuu joojiyaa sharoobada Pneumorel iyo kiniiniyada suuqa
Si dhakhso ah: Wasiirka Caafimaadka wuxuu joojiyaa sharoobada Pneumorel iyo kiniiniyada suuqa
Malachie Manaouda ayaa qortay karantiilka dawadan.
Tani waa macluumaad ay gudbisay wargeyska qaranka ee Cameroon. Malachie Manaouda ayaa ah wasiirka caafimaadka oo kaliya ku amray in uu ka tago daroogada Pneumorel. Wasiirka ayaa mamnuucay isticmaalka, bixinta iyo qaybinta daroogada. War-saxaafadeedka la xidhiidha taariikhda go'aanka laga soo bilaabo 9 bishii Abriil ee la soo dhaafay.
Qoraalkan, Malachi Manaouda waxay muujinaysaa in daroogada su'aasha ay leedahay saameyn xun oo laga yaabo in ay u badan tahay xanuunada wadnaha. Isticmaalka badeecada ayaa lagu soo warramey mareegta caalamiga ah ee ilaalinta caafimaadka dadweynaha.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/16/urgent-le-ministre-de-la-sante-retire-du-marche-le-medicament-pneumorel-sirop-et-comprimes/
VIDEO: Waa kuwan soo socda ee loogu talagalay viagra dabiici ah oo kaa dhigi doona inaad ku sifayso sariirta.